Dalalka Tirada Ugu Badan Ee Maxaabiis Ah Ku Jiraan Jeelashooda
Thursday October 14, 2021 - 08:40:06 in News by Hadhwanaag News
"Garsoorayaasha waxaa saaran cadaadis arrintan la xiriira"
Dilalkii xabsiyada ee dhawaan ka dhacay Ecuador oo ahaa kuwii ugu xumaa ee soo mara taariikhda dalkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 119 qof ayaa iftiimiyay dhibaatada buux dhaafka ah ee xabsiyada.
Khubaro badan ayaa tilmaamaya in tirada dadka ku jira xabsiyada Ecuador oo ah 133% ay ka mid ahayd sababaha ugu waaweyn ee masiibadaa keenay.
52 ka xabsi ee Ecuador waxaa ku jira in ka badan 39,000 oo maxbuus ku dhawaad 10,000 ka badan inta ay qaadi karaan marka loo eego tirakoobka rasmiga ah ee ku saabsan inta uu qaadi karo xabsigu.
Rabshadaha Guayaquil ayaa ahaa tii saddexaad ee laga diiwaan geliyo xabsiga Ecuador 2021 ka dib kuwii bishii Feeberweri iyo Juulaay oo sababay 79 iyo 22 dhimasho ah siday u kala horreeyaan.
Ecuador xitaa kuma jirto "10 ka dal ugu sarreeya" waddamada Laatiin Ameerika iyo Kariibiyaanka ee ugu xabsiyada badan.
Liiska kooban ee Xabsiga Adduunka keydka ugu horreeya adduunka ee arrimaha xabsiyada, oo uu soo aruuriyey mac-hadka cilmibaadhista caddaaladda dambiyada Ingiriiska ee magaciisa loo soo gaabiyo ICPR, Ecuador waxay ku jirtaa kaalinta 18-aad ee gobolka.
Si aad sawir buuxa uga hesho baaxadda dhibaatada, waxaa ku filan inaad aragto inuu jiro hal waddan oo ku yaal Koonfurta Ameerika oo aan lahayn xabsi dhammaystiran: Suriname, oo ah waddanka ugu yar qaaradda, oo ay ku jiraan xabsiyada 75.2% .
Chile ayaa ku xigta oo ku jirta kaalinta labaad halka ugu hooseysa, iyadoo leh 100.4%. Belize oo keliya waxay ka fogaanaysaa in dadku ku bataan oo keliya 49.8% iyo Mexico oo leh 101.8%.
Laakiin waxa ka si yaab badan tirakoobka ma aha oo kaliya joogitaanka tirooyinka ICPR waxay ku qiyaastay xakamaynta celceliska 160%. Laakiin, marka lagu daro dhulalka qaarkood tirada maxaabiistu waa laba, saddex, iyo xataa afar jeer inta ay qaadi karaan xabsiyadu.
Lix dal oo maxaabiista ku jirta xabsiyadu ay ka badan tahay tirada ay qaadi karaan
Waxaa jira lix gobol oo tirada maxaabiistu ay tahay laba, saddex ama afar jeer ka badan awoodda la heli karo. Wadamadan ayaa juquraafi ahaan ku yaal gobolka oo dhan: laba Koonfurta Ameerika, laba Bartamaha Ameerika, iyo laba Kariibiyaanka ah.
Midda ugu daran ayaa ah, Haiti, oo ah dalka ugu saboolsan Mareykanka, oo ay ku jiraan 454.4% maxaabiista.
Waxaa ku xiga Guatemala, oo kordhisa awoodda nidaamka xabsigeeda, oo ay ku nool yihiin 367.2%, iyo Bolivia, 269.9%.
Saddexdaas qaran waxay ka mid yihiin tobanka qof ee ugu dadka badan adduunka.
Grenada (233.8%), Peru (223.6%) iyo Honduras (204.5%) ayaa dhammaystiray liiska waddamada Laatiin Ameerika iyo Kariibiyaanka iyadoo tirada maxaabiistu ay labanlaabmayso awooddooda.
Waa maxay sababta dalalkan, iyo guud ahaan Koonfurta Ameerika, ay u qabaan dhibaato ba'an oo maxaabiista ku jirta? Khubaro la hadashay BBC Mundo ayaa xaqiijisay, in kasta oo ummad kasta ay leedahay dhibaatooyinkeeda, haddana waxaa jira dhowr arrimood oo wax ka tara.
Xabsi yaraani ma jirto
Waxaa hubaal ah in waxa ugu horreeya ee aad u malaynaysay ay ahayd in dhibaatada ugu weyni ahayd in aanay jirin xabsiyo ku filan oo la dhisay.
Qayb ahaan waa run. Korodhka tirada maxaabiista ayaa aad uga dhaqso badan marka loo eego korodhka tirada xabsiyada.
Laakiin xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in xabsiyo badan la dhisayo aysan xallin doonin dhibaatada buux dhaafka ah.
"Waxaan ognahay in xabsiyada badan ee la dhisay, in la buuxin doono.
"Garsoorayaasha waxaa saaran cadaadis arrintan la xiriira" ayuu yidhi Sacha Darke oo ah borofisar ku takhasusay dambiyada ee Jaamacadda Westminster UK oo darsay nidaamyada xabsiyada ee UK iyo Latin America. Darke wuxuu aaminsan yahay in dhibaatadu aysan ahayn tirada xabsiyada, laakiin tirada maxaabiista.
Wuxuu xusayaa in tirada maxaabiista ee aagga ay saddex laabantay tan iyo 2000, wuxuuna ugu yeeraa Koonfurta Ameerika "xero uruurin oo cusub." "Wuxuu dhex mari doonaa Waqooyiga Ameerika," ayuu yidhi, isaga oo ula jeeda dadka ugu xabsiyada badan dunida.
'' Maanta Maraykanku waaa dalka haya tirada ugu badan ee maxaabiista adduunka (in ka badan 2 milyan), tirada maxaabiista ee dadkana waa (629 maxbuus 100,000 qofba).
Xabsiyada Ameerika waxaa ku jira dad ka badan dhammaan waddamada Laatiin Ameerika iyo Kariibiyaanka marka la isku daro. Laakiin aqoonyahanku wuxuu ku adkeysanayaa in kasta oo Mareykanku uu gaadhay rikoodhkaas 2 milyan oo maxbuus labaatankii sano ee la soo dhaafay tan iyo markaasna tirada ma kordhin isla waqtigaas Koonfurta Ameerika tirada maxaabiista ayaa hoos uga dhacday 650,000 ilaa 1.7 milyan .
Caqabadaha nidaamka garsoorka
"Dhibaatada ugu weyni waxay ka jirtaa nidaamka caddaaladda ee ma aha nidaamka xabsiyada kaasoo aan go'aaminaynin qofka inta xabsiga lagu haynayo" ayuu yidhi César Muñoz oo ah cilmibaadhe sare oo ka tirsan xafiiska Koonfurta Ameerika ee hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee HRW oo BBC Mundo la hadlay. Muñoz ayaa farta ku fiiqay laba cilladood oo xagga garsoorka ah: dib u dhac iyo "adeegsiga xaddhaafka ah" .
Celcelis ahaan in ka badan 40% maxaabiista Koonfurta Ameerika ayaa la xidhay iyaga oo aan wax dacwad ah lagu soo oogin. Badhtamaha Ameerika na celcelis ahaan 35%.
Haddii aan ku darno xaqiiqda ah in hababka garsoorka ee dalal badan ay qaataan sanado qofku wuxuu fahmayaa sababta xabsiyada ay uga buuxiyaan maxaabiista wax ka badan intii ay awoodi karaan.
Siyaasadda ka hortagga daroogada
Waxa ugu dambeeyay ee muhiimka ah in la fahmo ayaa ah sababta maxaabiista Laatiin Ameerika ay u kordheen dhowrkii sano ee la soo dhaafay, khubaradu waxay leeyihiin.
"Maanta mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee xabsiga loogu jiro waa ka ganacsiga daroogada," ayuu yiri Darke. "Laakiin inta badan dadka la xiray ma aha kuwa ka ganacsada maandooriyaha, laakiin waa dhallinyarada noqota dilaaliin isku xira kuwa wax iibiya iyo kuwa iibsada," ayuu yiri, isagoo ula jeeda waxa loo yaqaan "iibinta daroogada."
"Koonfurta Ameerika, qof kasta oo iibiya daroogada waxaa loogu yeeraa ganacsade, laakiin Yurub waxay u yeeraan kuwa ugu sarreeya oo keliya," ayuu yidhi. Aqoonyahan Ingiriis ah ayaa tilmaamay in tafaariiqda dalkiisa - oo sidoo kale loo yaqaanno ganacsiga yaryar - aan lagu ciqaabin xabsi, taasina ay tahay sababta
"tirada maxaabiista ee Koonfurta Ameerika ay aad uga yar tahay Yurub.
Darke, sida Muñoz, wuxuu rumeysan yahay in siyaasaddan kahortagga daroogada aanay macno lahayn oo keliya laakiin sidoo kale saamaynteedu ballaadhan tahay.
"Waa wax soo saar la'aan in xabsiyada laga buuxiyo dad lagu qabto iyagoo daroogo ku iibinaya jidadka," ayay tidhi HRW oo ah hay'ad u doodda xuquuqda aadanaha.
"Ku rididda dadkan ha ahaato mid xidhan ama xukun xabsiyada ay gacanta ku hayaan kooxaha dambiilayaasha ah ayaa ugu dambeyntii wiiqaysa amniga guud maxaa yeelay waxay ku jiri doonaan jaamacadaha dambiyada dhabta ah,".
Kooxaha dambiilayaasha ah
Buuggooda "Xabsiyada iyo Dambiyada Laatiin Ameerika", oo la daabacay sannadkan ayaa aqoonyahannada Gustavo Fondevila iyo Marcelo Bergman waxay ku tilmaamaan xabsiyada kuwo "aan waxtar lahayn," xayndaabyo iyo hagaajiyayaasha rabshadaha iyo dambiyada ".
Iskahorimaadyada u dhexeeya kooxaha xabsiyada ayaa horseeday in maxaabiis lagu dilo Ecuador iyo rabshado dhowaan ka dhacay dhowr waddan oo kale oo gobolka ah sida Peru, Venezuela, iyo Brazil.
"Khubaradu waxay ka digayaan in cidhiidhigu door weyn ka ciyaaro korodhka kooxaha dambiilayaasha ah. Sababta oo ah waxaa jira xakameyn dowladeed oo kooban"ayuu yidhi Muñoz. "Markaa buux dhaafku wuxuu sii hurinayaa korodhka kooxaha dambiilayaasha ah."
"Xabsiyada ayaa ah arin aad muhiim ugu ah shabakadahan," ayuu intaa ku daray. Dhab ahaantii gobolkan waxaan ka jira kiisas badan oo ah budhcadda dambiilayaasha ah oo laga sameeyay xabsiyada ka dibna ku hawlan ganacsi sharci darro ah oo ka baxsan xabsiyada," ayuu yidhi isagoo tusaale u soo qaatay ururka dambiyada ugu weyn Brazil ee magaciisa loo soo gaabiyo (PCC).
Darke, ayaa dhankiisa ku doodaya in dalal badan saraakiisha xabsiyada "ay u baahan yihiin kooxo si ay u abaabulaan hawlgallada xabsiga"
"Meelaha qaarkood kooxahan waxaa magacaaba nidaamka xabsiga si ay u ilaaliyaan nidaamka," ayuu yidhi. Wuxuu ku sheegay qaabkaa "dowlad iskaashi."
"In kasta oo aysan siinayn agabkii nidaamka xabsiga oo aysan lahayn shaqaale looga baahnaa haddana waa wax iska caadi ah in dadka halkaas ka shaqeeya iyo kuwa aan maamuli karin xabsiga ay raadsadaan wadashaqeynta maxaabiista," ayuu sharxayaa.
Su'aahsu waxay tahay hadba maxaa xal u ah meertadan foosha xun marka laga reebo ka hortagga dembiyada sii socota? "Waa inaad maal gelisaa ka hortagga dembiyada halkii aad wax ka qaban lahayd dembiyada," ayuu ku taliyeey Muñoz. "Waa isbeddel xagga fikirka ah oo asaas u noqon doona Koonfurta Ameerika."